Ferretti Chalet eYosemite
Ikhaya leholide yonke sinombuki zindwendwe onguOlivia
Relax nosapho lonke kule chalet ezolileyo neyonwabisayo; ukonwabele ukujonga iYosemite National Park ekumgama wemizuzu engama-25- ebusika, eNtwasahlobo okanye ekwindla. Indawo yokuhlala efudumeleyo neyamkelekileyo, iidekhi ezimangalisayo zokungena kwindalo kunye negumbi lomdlalo kunye neFoosball kunye neHockey yomoya. Kwichibi elikhethiweyo kunye nokufikelela kwidama lokuqubha.
I-chalet ibekwe ngokumangalisayo kwaye ikhona eGroveland, CA, idolophu enqabileyo kufutshane nomnyango waseNtshona weYosemite, ekulungele ukuhlala ngelixa undwendwela ipaki (akukho ntlawulo yongezelelweyo efunekayo) Ukuba unqwenela ukuhlala kwindawo yonwabe kwaye ujabulele iNtaba yePine. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide, ukuba iimpawu, iGalufa, ukufikelela kwiLake, ukuQubha, iTennis, iPickle Ball. Ukudubula kunye nokunye, ukufikelela kokuzikhethela kufumaneka kwi-$ 40 / isithuthi sokuhlala ngaphantsi kweveki ye-1.
I-chalet inemigangatho emi-2 nganye inomnyango wayo: 1. Inqanaba eliphezulu (Iindlu zokulala 1-3 kunye namagumbi okuhlambela 1-2, Indawo yokuhlala, yokutyela, ikhitshi) 2. Inqanaba elisezantsi (Igumbi lokulala 4, igumbi leMidlalo kunye neBathroom 3) Kwakhona ine-55 ” Umabonwakude, iWIFI, ubushushu obuphakathi & a/c, isitovu seenkuni, imicrowave, umatshini wokuhlamba izitya, umenzi wekofu, i-oveni yetoasta, iketile yeti, iwasha & isomisi, imidlalo yebhodi, ifenitshala yomgangatho. Ukulala ukuya kutsho kwi-9. Amanqaku akhethekileyo:. ILINENS: Amashiti, iitawuli zokuhlambela, izinto zokuthuthuzela, iingubo, imiqamelo zilungiselelwe ukusetyenziswa ziindwendwe.
IGroveland yidolophu eqhelekileyo kufutshane neWest Entrance eYosemite National Park eneendawo zokutyela kunye neevenkile. Ihlala malunga ne-3500 ft ngaphezu komphakamo wolwandle kwaye inemozulu entle unyaka wonke. IGroveland ikwanendawo yesikhululo sokutshaja iTesla. Ikhosi yeGalufa entle enendawo yokutyela iyafikeleleka eluntwini.